Gabayga Ithaca ee Cavafis ee daabacaadda Buugaagta Nordic - Ikkaro
Inicio >> Buugaag >> Ithaca ee Cavafis
Waxaan u maleynayaa in qof kastaa ogaan doono Constantino Cavafis, abwaan Griig qarnigii XNUMXaad, ku dhashay Alexandria (Masar). Waxaa loo tixgeliyey abwaankii Griigga ugu mudnaa xilliyadii ugu dambeeyay. Gabaygiisii ​​caanka ahaa Ithaca, shaqooyin kale ayaa lagu daray sida Sugaya barbariyiinta o Ilaah wuu ka tagayaa Antonio.
Waxaad ka heli kartaa gabayga meel walba. Hadaad xiiseyneyso aqrintiisa, adiga ayaan kuu dhaafayaa dhamaadka. Laakiin waxa runtii loogu riyaaqay kiiskan waa tafatir. Waa buug dhan oo loogu talagalay 36-ka tuduc ee gabay.
Waa yaab in maalmaha yar ee aan haysto, aan ka soo saaro ku dhowaad maalin kasta si aan ugu raaxaysto oo aan u akhriyo. Dareenkaas, raaxadaas, laguma gaadhin dijitaal. Hadaad jeceshahay waad awoodaa halkan ka iibso
Gabaygan durba si wanaagsan ayaa loo darsay oo si heer sare ah loo lafa guray, waxaad raadsan kartaa falanqeyn dhab ah hadii ay tahay waxaad sugeyso. Waxa aan halkan kaga tegayaa waa dareenkayga oo aan wax ka beddeli doono maansada, oo ku saleysan dib-u-aqrin iyo waaya-aragnimadayda nolosha, waxay ii soo jeedineysaa macno cusub.
Waxa uu i siiyo waa talo. Ka faa'iideyso nolosha, uga faa'iideyso waddada wax kasta oo aad qabanaysid, himilooyinkaaga, maxaa yeelay waxa run ahaantii muhiim ah iyo waxa ku kobcin doona ayaa ah waaya-aragnimada, dhibaatooyinka aad kala kulanto safarka ama jidka aad u socoto yoolkaaga oo aanad u socon laftiisa.
Taasi waa sababta uu noogu dhiiri gelinayo inaynaan ku deg degin gaadhida meesha aan u socono, himilooyinkayaga, ithaaskeena iyo inay sahamiyaan, ku raaxaystaan, ku noolaadaan oo ay bartaan wixii aan kari karno. In safarka la dheereeyo lana kordhiyo khibradaha la soo noolaa.
Runtii waa wax lagu farxo in la akhriyo oo dib loo akhriyo gabaygan.
Hadaad soo gashay adigoo raadinaya gabayga halkan ayaad ku haysaa.Gabay Ithaca waxaa qoray CP Cavafis (Waxaa tarjumay Vicente Fernández González)
Markii aad u dhaqaaqdo safarkaaga aad ku tagaysid Ithaca,
Weydiiso in jidkaagu dheeraado,
ka buuxa riwaayadaha, aqoonta ka buuxo.
Ku socota Laystrygians iyo Cyclops.
Ha ka baqin Poseidon careysan,
Weligood ka gudbi maayaan jidkaaga,
Haddii fikirkaagu sarreeyo, haddii shucuur tahay
jilicsan ee ruuxaaga iyo buulasha buulkaaga.
Midkoodna Laystrygians ama Cyclops
iyo Poseidon kulul oo aad heli doontid,
hadaadan ku dhex qaadin naftaada,
haddii naftaadu aysan iyaga ku qaadin jidkaaga.
iyo subaxyo badan oo xagaaga ah
kaas oo - leh raaxo, iyo farxad -
waxaad soo gashaa dekado aan weligood la arkin;
joogso boqortooyooyinkii Fenisiyiinta,
oo soo iibso badeecadaada qaaliga ah,
hooyo luul iyo dhuxul, iyo kuul iyo
iyo caraf udgoon oo cayn kasta leh,
udgoonka badan ee dareenka leh ee aad awoodid;
magaalooyin badan oo Masar ah ayuu ku arkaa,
in wax laga barto oo wax laga barto kuwa wax garanaya.
Had iyo jeer maskaxda ku hay Ithaca.
Inaad halkaa gaarto waa halkaad u socoto.
laakiin iyadoo aan lagu degdegin safarka.
Waxay ka fiicnayd in sanado badan la kordhiyo;
gabowna waxaad ku degtaa jasiiradda,
iyo dhammaan maalkii jidka lagu soo helay,
adigoon sugin Ithaca inay ku taajirto.
Ithaca ayaa ku siisay safarkii wacnaa.
La’aanteed ma aadan socdeen.
Mar dambe wax kale kuma siin karo.
Hadaad hesho miskiinteeda, Ithaca kuuma khiyaanayn.
Xigmadda aad ku kasbatay, khibradaada,
horeba waad u fahmi lahayd waxa Ithacas loola jeedo.
Macluumaad xiiso leh, qalab iyo ilo si loo qoto dheereeyo aqoonta qoraaga iyo shaqadiisa
Diiwaanka Rasmiga ah ee Cavafis (Ingiriisiga)
1 Micnaha Ithaca